Author Topic: ကိုကိုထွန်းအေးတင်တဲ့ဟာသများ (Read 247630 times)
« Reply #570 on: September 06, 2011, 12:35:00 PM »
" ဆေး စာ ပါ မှ ရောင်း မယ် "
ချူချာတစ်ယောက် ဆေးဆိုင်သို့ရောက်လာကာ ၀က်အူချောင်း တစ်ကီလို ရောင်းရန်
" ဒါ ဆေးဆိုင်ရှင့်.. စားသောက်ကုန် ရောင်းတဲ့ဆိုင် မဟုတ်ဘူး "
နောက်တစ်နေ့ တွင် ဆေးဆိုင်သို့ကိုချူချာ ထပ်ရောက်လာပြီး မနေ့ ကအတိုင်း ၀က်အူ
ချောင်း ရောင်းရန် ပြောပြန်သည် ။
" ရှင် ကျမ နေရာမှာ နေကြည့်ရင် ကောင်းမယ် "
အရောင်းသမ က မကျေမနပ် ပြောသည် ။ သို့ ဖြင့် နေရာချင်း လဲလိုက်ကြပြီး အရောင်း
သမ က ပြောသည် ။
" ထောပတ် တစ်ကီလို .. သကြား တစ်ကီလို ရောင်းပါရှင်.. "
ကိုချူချာ ပြန်မေးသည် ။
" ဆေးညွှန်းပါရဲ့ လား. "
« Reply #571 on: September 06, 2011, 12:44:03 PM »
" ပိုက် စိတ် တိုက် "
သတင်းထောက် - " ဥက္ကဌကြီး ဒီနှစ် ဂျုံရိတ်တာ စောလှချည်လား "
စုပေါင်းလယ်ယာ - " မတတ်နိုင်ဘူးဗျာ.. မနေ့ က အရေးကြီးတဲ့ ဘောလုံးပွဲ ရှိခဲ့တယ် ။
ဥက္ကဌ အဲ့ဒီပွဲမှာ ကျနော်တို့စုပေါင်းလယ်ယာအသင်း ရှုံးတယ်..၊ ပွဲအပြီး
မှာ ဒိုင်လူကြီးက ဂျုံခင်းထဲမှာ ၀င်ပုန်းနေတယ်လေ.. "
« Reply #572 on: September 06, 2011, 12:52:57 PM »
" အ ပြန် အ လှန် "
ဒီမိုကရက်တစ် ပါတီ အမတ်လောင်းက ရီပတ်ပလီကင်မှ အမတ်လောင်းကို
ဤသို့ ပြောသည် ။
" ကျနော်တို့တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အပြန်အလှန် တိုက်ခိုက်
စွတ်စွဲတာတွေ ရပ်လိုက်ကြရအောင်..။ မိတ်ဆွေရော ကျနော်ပါ အ
ကျိုးယုတ်တယ်ဗျာ...။ အဲ့ဒီ့တော့ ဒီလိုလုပ်ပါ ။ ခင်ဗျားက ကျနော့်
ကို မဟုတ်တန်းတရား စွတ်စွဲ ပြောဆိုတာတွေ ရပ်ပါ ။ ကျနော်က
လည်း တုန့် ပြန်တဲ့ အနေနဲ့ခင်ဗျားအကြောင်း အမှန်ချည်း ပြောတာ
တွေကို ရပ်လိုက်မယ် .... "
« Reply #573 on: September 06, 2011, 01:03:13 PM »
" အာ ဂ အ ဖေ "
ကျနော့် ဖေဖေ ခေါင်းစဉ်ဖြင့် စာစီစာကုံး ရေးရာ ပီတာလေးက ဤသို့ဖြေသည် ။
" ကျနော့်၏ ဖေဖေသည် လူစွမ်းကောင်း အာဂလူ ပင် ဖြစ်သည် ။
ပင်လယ်ကိုြ့ဖတ်ကူးနိုင်သည် ။ သဲကန္တာရကို ဖြတ်လျှောက်နိုင်သည် ။
ကျားကို ရင်ဆိုင် သတ်ရဲသည် ။ သူ မလုပ်နိုင်တာ မရှိပေ..။ သို့ သော်
လောလောဆယ်တွင် သူသည် ပန်းကန်ဆေးခြင်း ၊ အမှိုက် သွန်ခြင်း
ကိုသာ မကြာခဏ ပြုလုပ်နေရပေသည် ။ "
« Reply #574 on: September 07, 2011, 01:26:37 PM »
" ယော က္ခ မ "
မိန်းမကြီး နှစ်ယောက် လူငယ်တစ်ဦးကို ခေါ်ဆောင်လျှက် ဆော်လမွန်ဘုရင်ကြီးထံ
ရောက်လာသည် ။ ပထမ မိန်းမကြီးက ပြောသည် ။
" ဒီလူငယ်ဟာ ကျမရဲ့ သမီးကို လက်ထပ်မယ်လို့ကတိပေးခဲ့ပါတယ်. "
ဒုတိယ မိန်းမကြီးက ကန့် ကွက်သည် ။
" မဟုတ်ပါဘူး... ကျမရဲ့ သမီးကို ယူပ့ါမယ်လို့သူ ကတိပေးခဲ့တာပါ "
ဆော်လမွန်ဘုရင်ကြီးသည် မိမိ၏ လက်သုံးတော် ဓားရှည်ကို ယူလာခိုင်းပြီး မိန်းများကိုပြောသည် ။
" ခင်ဗျားတို့အငြင်းပွားနေကြတဲ့ ပြဿနာကို ငါ ကိုယ်တော်မြတ် အခုလို
ဖြေရှင်းပေးမယ်..။ ဒီလူငယ်ကို ဓားနဲ့နှစ်ပိုင်း ပိုင်းလိုက်မယ်.. တစ်ပိုင်းစီ
ပထမ မိန်းမကြီးက သဘောတူသည် ။
" အရှင်မင်းတရားကြီး ဆုံးဖြတ်တဲ့အတိုင်း လိုက်နာပါ့မယ်ရှင့် "
ဒုတိယ မိန်းမကြီး ကန့် ကွက်သည် ။
" သွေးထွက်သံယို ဖြစ်တာတွေ ကျမ မမြင်ချင်ပါဘူး.. ဒီလူငယ်ကို မသတ်ပါနဲ့ 
သူ့ ကို သမက် မတော်ရလဲ နေပါစေတော့ "
မိန်းမကြီး နှစ်ယောက်၏ တုန့် ပြန်ချက်ကို နားထောင်ပြီးနောက် ဘုရင်ကြီးက အောက်ပါ
အတိုင်း အမိန့် ချမှတ်သည် ။
" ဒီလူငယ်ကို ပထမ မိန်းမကြီးရဲ့လက်ထဲ အပ်လိုက်... ဒီမိန်းမကမှ တကယ့်
ယောက္ခမ ပီသပေတယ်. "
« Reply #575 on: September 07, 2011, 01:33:20 PM »
" အ ထိမ်း အ မှတ် "
အမျိုးသမီး တစ်ဦး ယောင်္ကျားဖြစ်သူကို ထောင်ဝင်စာ လာတွေ့ သည် ။ မိန်းမ၏
ပါးစပ်မှ အရက်နံ့အနည်းငယ် ရသဖြင့် ယောင်္ကျားက မေးသည် ။
" ဟေ့..မင်း ဒီနေ့ဘာဖြစ်လာတာလဲ "
မိန်းမက ရှင်းပြသည် ။
" ဘာလဲ..ရှင်မေ့နေပြီလား...ဒီနေ့ ဟာ နှစ်ပတ်လည် နေ့ လေ "
" ဘာနှစ်ပတ်လည်လဲကွ "
" ဒီနေ့ ဟာ ရှင် ထောင်ထဲရောက်တဲ့ သုံးနှစ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်နေ့ ..
အဲ့ဒါ အထိမ်းအမှတ် အဖြစ်နဲ့ရှင့် ကျန်းမာရေးအတွက် မိတ်ဆွေတွေနဲ့ 
ဆုတောင်းပြီး သောက်လိုက်ကြတယ်ရှင့် "
« Reply #576 on: September 07, 2011, 01:38:14 PM »
" အ ထင် မ လွဲ ပါ နဲ့"
အမျိုးသမီး တစ်ဦးက သူမ၏ ယောင်္ကျားနှင့်ပတ်သက်ပြီး သူငယ်ချင်းမ ကို
" သိလား... အိမ်က ယောင်္ကျား ထောင်ခြောက်လ ကျသွားတယ်တော့..
ဟင်း ကျသွားတာပဲ ကောင်းတယ်..။ ကျမကို ပြောတော့ နယ်က သူ့ 
အမျိုးတွေဆီ သွားလည်မလို့ တဲ့.. လူလိမ်လူညာကြီး.. "
" ဒီလိုလဲ အလျင်စလို အပြစ်မတင်နဲ့ လေ..။ သူ့ ဆွေမျိုးတွေလဲ ထောင်ကျ
နေတာ ဖြစ်ချစ် ဖြစ်မှာပေါ့.. "
« Reply #577 on: September 07, 2011, 01:45:36 PM »
" ဘယ် ကို နဲ့ဘယ် လို "
လက်တွေ့ ဆင်းရန်အတွက် ဆေးကျောင်းသားများကို ပါမောက္ခက ဆေးရုံသို့ 
" မောင်ဘမောင်.. အခန်း ၅ ၊ ကုတင် ၄ က လူနာကို ၀မ်းသွားချူချေ.. "
မောင်ဘမောင် ၀မ်းချူကရိယာကို ယူပြီး ထွက်သည် ။ ၄င်း၏ နောက်မှ တစ်
တန်းတည်းသား အေးလွင် လိုက်မည်ပြုသည် ။ ပါမောက္ခက ၄င်းကို တားသည် ။
" မောင်အေးလွင်... မင်း ဘယ်ကို သွားမလို့ လဲ "
" ကျနော်....ဘမောင်ကို ကူမလို့ ပါ..။ သူနဲ့ကျနော် အထူးပြုလေ့လာတဲ့
အစိတ်အပိုင်းမှာ အတော်လေး နီးစပ်လို့ ပါ.. "
" ပြောစမ်းပါဦး...ဘယ်လို နီးစပ်တာလဲ.. "
" ဒီလိုပါ...သူက ပိုက်ကို ဘယ်အထဲ ထည့်ရမလဲ ဆိုတာ သိတယ်..ကျနော်က
ဘယ်လို ထည့်ရမလဲ ဆိုတာ သိပါတယ်. "
« Reply #578 on: September 07, 2011, 01:54:52 PM »
" စံ ပြ လုပ် သား "
အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက ၄င်း၏ လက်အောက်ဝန်ထမ်းကို မေးသည် ။
" ကိုချူချာ... ခင်ဗျား ကျန်းမာရေး အခြေအနေ ကောင်းတယ်နော်.. "
" ကောင်းပါတယ် ဆရာ.. လုပ်သက် ၁၂ နှစ်အတွင်းမှာ တစ်ခါမှ
နေထိုင်မကောင်း မဖြစ်ခဲ့ဖူးပါဘူး.. "
" အင်း အင်မတန် အံ့သြစရာကောင်းတာပဲ.. အစာအိမ်ရောဂါ ၊ နှလုံး
ရောဂါ..သွေးတိုးရောဂါ.. ခြေလက်ကိုက်ခဲတဲ့ ရောဂါဝေဒနာ တစ်ခါ
မှ မခံစားခဲ့ရဘူး...ဟုတ်လား.. "
" ကိုချူချာ.. ခင်ဗျား...ကျနော့်ကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောစမ်းပါ..ခင်ဗျား
ရုံးမှာ ဘာအလုပ်မှ မလုပ်ပဲ ရေသာခိုနေတဲ့သူ ထင်တယ်. ဟုတ်လား "
« Reply #579 on: September 08, 2011, 01:58:15 PM »
" သေ ဒဏ် "
လူသတ်မှု ကျူးလွန်ခဲ့သော ရာဇ၀တ်သား သုံးဦးကို ကြိုးဆွဲချပြီး မသေမချင်း
သတ်ရန် ရုံးတော်က အမိန့် ချလိုက်သည် ။ ပင်လယ် ကမ်းခြေ တစ်နေရာတွင် ကြိုး
ဆွဲချသတ်မည့် တိုင်သုံးတိုင်`၌ ကြိုးကွင်း သုံး ကွင်းကို ချည်ထားလိုက်သည် ။
လူဆိုးနှစ်ဦး၏ ချမ်းသာသော ဆွေမျိုးများက ပါးကွက်သားကို လာဘ်ထိုးလိုက်
သည် ။ သို့ နှင့် ၄င်းတို့ အတွက် လျာထားသော ကြိုးကွင်းနှစ်ကွင်းကို မပြတ်ရုံတမယ်
ဓားနှင့် လှီးထားလိုက်သည် ။
သတ်မည့်နေ့ရောက်လာသည် ။ ဖော်ပြပါ လူဆိုးနှစ်ဦးကို ပါးကွက်သားက အရင်
" သတ် " ဖို့လုပ်သည် ။ ကြိုးကွင်းပြတ်ပြီး လူဆိုးနှစ်ယောက်စလုံး ရေထဲ ကျသည် ။
ရေကူးပြီး ၄င်းတို့လွတ်မြောက်သွားကြသည် ။ ဤသည့်ကို ကြည့်ြုပီး ကျန်နေသည့် လူ
ဆိုးက စိုးရိမ်တကြီး ပြောသည် ။
" ဟေ့ လူ... ကျုပ်ကိုတော့ မကျီစားနဲ့ နော် .. ကျုပ် ရေမကူးတတ်ဘူးဗျ "